Moments leh saaxiibo 61
Maxaa keena xasuusta luminta?
Xasuus la'aanta waa natiijada jirka ama maskaxda ama sabab maskaxeed. Sababta ugu weyn ee jirka u keenta luminta xusuusta waa cilad ku timaadda xarumaha neerfayaasha ee maskaxda, kana horjoogsada caqliga inay ku shaqeeyaan dareemahooda. Tusaale ahaan: Haddii ay jiraan cillado gaar ah oo ku yaal xarunta dareemeyaasha indhaha iyo xarunta aragtida iyo aragtida thalami, si looga dhigo in kuwan laga tuuro taabashadooda '' aragtida aragtida 'ama muuqaalka aragtida ah, markaa aragtidan ma fahmi karto ama ha u isticmaalin dariiqyadeeda jireed si ay ugu soo saaraan maskaxda shayga jireed ee laga soo jiiday dareenka. Haddii wax ka beddelidda dareemayaasha maqalka iyo xarunta dareemeyaasha ay saameeyeen, markaa “dareenka dhawaaqa” ma awoodo inuu ku hawl galo kuwan, sidaa darteed ma soo saarikaro maskaxda maanka codka ama magaca shayga ama goobta ay aragtidu ku guuldaraysatay. si loo soo saaro, oo markaa waxaa jiri kara luminta xusuusta aragga, iyo xusuusta codka oo sabab u ah sababaha jidhka. Tani waxay muujin doontaa luminta xusuusta dhadhanka iyo xusuusta urka, sababtoo ah sababaha jirka. Cadaadis saaran xarumaha dareemeyaasha, dharbaaxo madaxa ku dhaca, gariir kadis ah oo ku dhaca dhicitaanka, wareegga wareegga, naxdinta dareemayaasha ee dhacdooyinka lama filaanka ah, ayaa laga yaabaa inay isla markiiba sababaan xusuus jirka.
Haddii caqabadda jireed ama cillad xagga dareemayaasha ee xarumahooda laga saaray ama la dayactiro, waxaa jiray khasaare ku meel gaar ah oo xusuus yar oo jir ahaaneed ah. Haddii meesha laga saaro ama la dayactiro suuro gal ma aha, markaa lumintu waa joogto.
Xusuusta ma xafido qayb kasta oo jirka ka mid ah, ama jirka guud ahaantiisa. Toddobada amar ee xusuusta: xusuusta-aragga, codka-xusuusta, xusuusta-xusuusta, xusuusta-urinta, taabashada ama dareenka-xusuusta, akhlaaqda, “I” ama xusuusta - ayaa lagu xusay "Waqtiyo lala saaxiibo," bishii Nofembar, 1915, soo saar- samee dareenka xusuusta oo dhan oo halkan lagu magacaabay shaqsiyad-xusuus. Mid kasta oo ka mid ah xusuusta-xusuusta iyo dhammaan toddobada xusuus ee wada-shaqaynta iyo wada-shaqaynta ayaa ka kooban shakhsiyadda-xusuusta. Xusuusta shaqsigu waxay leedahay laba dhinac ama dhinac: dhinaca jirka iyo dhinaca maskaxda. Dhinac ahaaneed ee shakhsiyadda-xusuusta waxay la xiriirtaa jirka jir ahaaneed iyo dunida jir ahaaneed, laakiin garashada iyo xusuusta kuwani waxay ku jiraan dareemayaasha maskaxda mana aha jirka jirka ama xubnaha jirka ee dareenka. Xusuus-qorka shakhsigu wuxuu bilaabmaa marka uunka aasaasiga ah ee bini aadamka, aadanaha, uu maareysto inuu isku dubbarido oo uu isku dubbarido labo ama in kabadan oo ka mid ah dareenkiisa oo ay ku dheehan tahay dareenka xubnahooda jir ahaaneed iyo inuu ku foogan yahay waxyaabaha qaarkood. Dabcan, "I" dareenku waa inuu ahaadaa mid ka mid ah dareennada isku-duwidda iyo ku foognaanta mid ama in ka badan oo dareennada ku foognaa oo ka dhex shaqeeya xubnahooda gaarka ah ee dareenka. Xusuusta ugu horreysa ee qofku leeyahay jiritaankiisa jir ahaaneed waa markii dareenkiisa "I" ee shakhsiyaddiisa la toosay oo lala kaashanayo mid ama in ka badan oo ka mid ah dareenkiisa kale, halka ay diiradda saarayaan wax uun jir ahaaneed ama dhacaya. Cunugga ama cunugga wuxuu arki karaa shayga oo wuxuu maqli karaa dhawaaqyada ka hor intaanu "toosin" dareenka toosin oo wuxuu iskugu xiran yahay aragtida iyo maqalka. Inta lagu jiro wakhtigaas kaliya waa xayawaan. Ma aha ilaa ilmuhu uu awood u yeesho inuu ka fikiro ama dareemo ama yiraahdo "I" ee la xiriira aragtida ama maqalka ama dareen kale, ma jiritaanka aadanaha ama xusuusta shaqsiyanka ayaa bilaabaneysa. Dhinac ahaaneed ee shakhsiyadda-xusuusta wuxuu ku dhammaadaa geerida jidhka jirka, oo waqtigaas bini-aadamka aadanaha ah ee dareenkiisu ka baxo uu ka noqdo qoloftiisa, jirka jirkiisa, waana laga goynayaa xubnaha iyo xarumaha dareemeyaasha.
Dhinaca maskaxda ee shakhsiyadda-xusuusta waa inay ku soo beegmaysaa ama ka hor bilowga shakhsiyadda-xusuusta. Markaa dareenka "I" wuu soo jeedaa oo wuxuu isku xidhi lahaa qaab leh hal ama in kabadan oo ka mid ah dareennada maskaxda, sida clairvoyance ama clairaudience, oo kuwan ayaa lala xidhiidhiyaa oo la xidhiidha xubnaha jidh ahaaneed ee dareenka adduunka maskaxda. adduunyada jireedna waa la hagaajin karaa lana xiriira jidhka jidhka iyo xubnaheeda. Laakiin la qabsigaan maskaxda ee dhinaca jirka ee shaqsiyadda-xusuusta lama sameeyo, iyo dareenka nafsigu caadiyan kuma furna dabeecada qofka. Xusuus-qorka maskaxdu waxay badanaa si aad ah ugu dhowdahay xubnaha jirka iyo walxaha jireed ee dareenka ah in qofku caadiyan awood u lahayn inuu kala saaro ama haysto xusuusta jiritaanka marka laga reebo jirkiisa jir ahaaneed.
Haddii dhinaca dhimirka ee shakhsiyadda-xusuusta loo jeediyo waxyaabo jireed, shakhsiyadda nafsigu waxay dhammaan doontaa dhammaadka dhimashada jirka, nolosha iyo camal ahaanta shaqsiguna way dhammaan doontaa oo la tirtirayaa. Dhacdada noocan oo kale ah waxay noqon doontaa sida faaruq ah ama wasakh ama nabar laga sameeyay maskaxda ku xiran shakhsiyaddaas. Markii dareenka loo jeediyo maadooyin ku habboon fikirka, sida hagaajinta aadanaha, waxbarashada iyo hagaajinta dareenka adoo adeegsanaya maaddooyin ku habboon gabayada, ama muusikada, ama farshaxanka, ama farshaxanimada, ama raadinta ugu habboon xirfadaha. , markaa dareenku wuxuu nafsadiisa ku qaataa maskaxda, maskaxduna waxay gudbisaa, dhimashada ka dambeysa, xusuusta dadkaas dareenka wanaagsan ee dareenka leh ee laga dheehan karo. Shakhsigu wuxuu ku yimaadaa geerida ka dib, iyo xusuusta gaarka ah ee shakhsiyaadka ku xiran walxaha jirka iyo waxyaabaha noloshaas ku jira oo lagu burburiyo jabinta dareenka kaasoo sameeyay shaqsiyaddaas. Halkee, si kastaba ha noqotee, dareenka nafsaaniga ah ee shakhsiyaddaas waxay ka walaacsan yihiin maaddooyinka ugu habboon ee maskaxda ku xiran, halkaas maanka ayaa ku xambaarsan aragtiyo. Marku maskaxdu u dhisto shakhsiyad cusub oo ka kooban dareenkiisa cusub, xusuusta shaqsiyaddii hore ee ay martay maskaxdu sida muuqaallada ayaa soo jiidan doona dareenka isla markaana ka caawin doona horumarkooda dhinacyada maadooyinka gaarka ah ee ay ku lahaayeen. ee la soo dhaafay ka walaacsanahay.
Xasuus la’aanta noloshii hore iyo noloshii hore waxaa sababa luminta shaqsiyaadkii ugu dambeeyay iyo kuwii hore. Maaddaama aadanuhu uusan lahayn xasuus kale oo ka baxsan toddobada amar ee shakhsiyadda-xusuusta, ninku ma ogaan karo ama ma xasuusan karo marka laga reebo dareenka shakhsiyadiisa, ama marka laga reebo waxyaabaha ku xiran shakhsiyaddaas. Wuxuu lumiyaa xusuusta noloshii hore maxaa yeelay dareenka qof shaqsiyadeed ayaa jahwareeriyay oo jabaya dhimashadiisa, mana jiraan wax u hadhay inuu dib uga soo saaro dareen-xusuus ee nolosha soo socota, waxyaabihii shakhsiyaddaas daneynayay.
Qeyb ama gebi ahaanba luminta xusuusta waxyaabaha ku xiran noloshan waxaa u sabab ah naaquska ama luminta joogtada ah ee aaladda taas oo xusuusta ay ku shaqeyso, ama dhaawaca ama luminta waxyaabaha aasaasiga ah ee keena xusuusta. Lumista aragga ama maqalka ayaa loo aanayn karaa sabab jir ahaaneed, sida dhaawac ka soo gaadhay isha ama dhegta. Laakiin haddii waxa loogu yeedho aragga ama waxa la yidhaa dhawaqa dhawaac uusan weli dhaawacmin, oo dhaawaca ku dhaca xubnaha la hagaajiyo, ka dib aragtida iyo maqalka ayaa la soo celin doonaa. Laakiin haddii ay kuwan naftooda dhaawacmeen, markaa ma jiri doontid oo keliya lumitaanka aragga ama maqalka, marka loo eego dhaawaca, laakiin noolahaasi ma awoodi doonaan inay soo saaraan iyagoo xusuus u ah aragtiyaha iyo dhawaaqyadii ay hore u yiqiin.
Xusuusta oo lumisa, markii aan loo aanayn sababaha jireed, waxaa lagu soo saaraa ku xadgudubka dareenka ama la'aanta xakamaynta iyo waxbarashada dareenka, ama xirashada dareenka macnaha, taasoo keenta da 'weyn, ama maskaxda. ku saabsan mawduucyada fikirka iyada oo aan loo eegin xaaladaha jira.
Galmo xad dhaaf ah ee shaqada galmadu waxay dhaawac ku keentaa in loogu yeero arag; iyo heerka dhaawaca soo gaarey wuxuu go'aaminayaa heerka qeyb ahaan lumis ama wadarta luminta aragga. Iyada oo la tixgaliyo adeegsiga ereyada iyo laxiriira dhawaaqyada waxay ka hortagtaa koritaanka iyo horumarka ee loo yaqaan macno-yeeley waxayna ka dhigeysaa mid aan awood u lahaan karin dib-u-dhigista xusuusta dhawaaqa ee ay heshay. Xumeynta qalcadda 'ama' dayaca si loo beero 'palate', waxay hoos u dhigeysaa waxa loogu yeero dhadhanka waxayna ka dhigaysaa mid aan awood u laheyn kala soocida dhadhanka iyo soo saarista xusuusta. Qasriga ayaa ku xadgudbay aalkolada iyo waxyaabaha kale ee kiciya, iyo quudinta xad-dhaafka ah iyada oo aan loo jeedin nafaqooyinka gaarka ah ee dhadhanka cuntada. Xasuus la’aanta dareenka ayaa ka dhalan kara cilad-la’aan ku timaada ficilada aragga iyo codka iyo dareenka dhadhanka, adigoo caloosha iyo mindhicirka ku buuxiya wax ka badan oo ay dheefshiidi karaan, ama iyaga oo gelinaya wixii aysan dheefshiido. Waxa loo yaqaanno urka waa shaqsiyada qofka aasaasiga u ah, galmo magnet ahaan awood u leh galmo. Shaqo la'aanta ku timaadda ficil, oo wax u dhimaya dareenka kale, waxay baabiin kartaa ama iska tuurin kartaa diiradda urta dareenka, ama waxay dumin kartaa waxayna ka dhigaysaa inaysan awoodin inay iska diiwaangeliso ama soo saari karto astaamaha shayga; iyo, cillad la’aan ama quudin aan habboonayn ayaa xannibi karta ama habeyn kara waxayna sababi kartaa luminta xusuusta urka.
Kuwani waa sababaha luminta xusuusta gaarka ah. Waxaa jira cillad xaga xusuusta ah oo aan runtii lumin xusuusta, in kasta oo inta badan loogu yeedho. Qofku wuxuu u socdaa inuu iibsado qodobo gaar ah, laakiin markuu yimid bakhaarka ma xasuusan karo wuxuu iibsaday. Qof kale ma xasuusan karo qaybo ka mid ah fariinta, ama wuxuu sameyn doono, ama wuxuu raadinayo, ama meesha uu wax dhigo. Mid kale wuxuu iloobaa magacyada dadka, meelaha, ama waxyaabaha. Qaarkood waxay iloobaan tirada guryaha ama jidadka ay ku nool yihiin. Qaarkood ma awoodo inay xasuustaan ​​wixii ay yiraahdeen ama sameeyeen shalay ama usbuuc ka hor, in kasta oo ay awoodi karaan inay ku sifeeyaan dhacdooyinka saxda ah caruurnimadoodii hore. Badanaa cilladaha noocan ah ee xusuusta waa astaamaha hoos u dhigida ama xidhashada dareenka iyagoo da 'weyn; laakiin xitaa hore sidan oo kale da'da hore waxaa u sabab ah xakameyn la'aanta caqliga iyadoo la xakameynayo maskaxda, iyo iyadoo aan la tababarin caqliga si ay u noqdaan wasiiro run ah maskaxda. "Xusuusta xun," illowga, "" miyir la'aanta, "waa natiijooyinka qofku inuu ku fashilmo inuu xakameeyo maskaxda si maskaxdu u maamusho caqliga. Sababaha kale ee cilladaha xusuusta waa ganacsiga, raaxada, iyo caqabadaha, kuwaas oo maskaxda geliya oo loo oggol yahay inay xajistaan ​​ama ay tirtiraan wixii ay damacsanaayeen in la sameeyo. Mar labaad, marka maskaxdu ku mashquulsan tahay mowduucyo fikir ah oo aan la xiriirin xaaladaha jira ama dareenka, dareenku wuxuu ku wareegayaa agabyadooda dabiiciga ah, halka maskaxdu lafteeda ku howlan tahay. Kadibna wuxuu raacaa miyir-beelka, illowga.
Ka gaabinta inaad xasuusato ayaa ugu horreyn ah inaadan ka bixin taxaddarka lagama maarmaanka u ah waxa la doonayo in lagu xusuusto, iyo in amarka aan la caddeynin, iyo in aan si xoog ah loogu amro amarka ay tahay in la xuso.
Maxaa keena mid ka mid ah inuu iloobo magaciisa ama meesha uu ku nool yahay, inkasta oo uu xusuustiisu aysan ku dhicin dhinacyo kale?
Xusuusnow magaca qofka iyo halka qofku ku nool yahay, waxaa sabab u ah tuurista dareenka "I" iyo aragtida aragga iyo codka dareenka taabashada ama diiradda. Marka dareenka "I" la xiro ama laga gooyo dareenka kale ee xusuusta shakhsiga, iyo dareenka kale ee sifiican loola xiriiro, shakhsigu wuu ku dhaqmi doonaa isagoon haysan aqoonsi — taasi waxaa weeye, bixinta ma uusan qarsan ama qaadan. xoogaa kale. Qofka khibradahan oo kale leh ayaa laga yaabaa inuu garto meelaha uuna ka sheekaysto waxyaabaha caadiga ah ee aan u baahnayn aqoonsi marka loo eego naftiisa. Laakiin wuxuu dareemayaa faaruq, faaruqnimo, lumis, sidii isagoo raadinaya wax uu yaqaanay oo hilmaamay. Xiriirintan mid ka mid ah ma yeelan doono dareenka caadiga ah ee mas'uuliyadda. Isaga wuu sameyn lahaa, laakiin kama imaanaayo dareenka waajibka. Wuxuu wax cunaa marka uu gaajoonayo, wax cabbo marka uu oomman yahay, wuxuuna seexdaa markay daalan tahay, waxoogaa sida xayawaanku u cunaan, marka ay ku kiciyaan dareen dabiici ah. Xaaladdaan waxaa sababi kara xannibaadda maskaxda, oo ka mid ah marinnada wareega, ama faragelin jirka ku samaysa. Hadday sidaas tahay, dareenka "I" waa la soo celin doonaa markii caqabadda laga saaray. Markaa dareenka "I" ayaa mar kale ku soo noqonaya oo taabanaya dareenka kale, isla markaana qofkaasi isla markiiba wuu xusuusan doonaa magiciisa, oo wuxuu gartaa meesha uu ku sugan yahay iyo gurigiisa.